February 2013 ~ Myanmar Forward
ဘင်္ဂလီ အရေးငြိမ်နေသော နော်ဝေရောက်ဒုက္ခသည်များကို ပလေတို စိန်ခေါ်သည်
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ဘင်္ဂလီ အရေးကို နှစ်ရှည်လများ စီမံ ကိန်း ချ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ အော်စလို က Euro Burma Office မှာ ကပ်ဖား ရပ်ဖား လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဘင်္ဂလီအားပေး တွေ....
ဟန်ညောင်ဝေနဲ့ ၀ါကာအူဒင် ဟန်ချက် ညီညီနဲ့ ဥရောပ ပါလီမန် တွေ၊ ဥရော ပအစိုးရတွေကို လော်ဘီ လိုက် လုပ် ဥရောပတစ်လွှားမှာ ဘင်္ဂလီ ဆိုရင် သနားစရာ လူနည်းစု ဆိုပြီး အမြစ် တွယ် ထင်ကျန်နေအောင် လုပ်ခဲ့တုန်းက အားပေးအားမြှောက် ဆင်ဖြူတော် မှီပြီးကြံစုပ် ခဲ့တဲ့ သူတွေ...
AFC Cup ပြိုင်ပွဲတွင် ဗီယက်နမ်ကလပ် ဒါနန်းအသင်းကို ဧရာဝတီအသင်း အဝေးကွင်း၌ (၂-၁) ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
2013 AFC Cup ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (G) ပွဲစဉ်ဖြစ် သည့် ဗီယက်နမ်ကလပ် ဒါနန်းအသင်းနှင့် မြန်မာ ကလပ် ဧရာဝတီယူနိုက်တက် အသင်း တို့၏ပွဲ ကို ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၇) ရက်က ဗီယက် နမ်နိုင်ငံတွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်းပွဲစဉ်တွင် ဒါနန်းအသင်းက ဧရာဝတီအသင်းကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး ပွဲဦးထွက် ၃ မှတ်စတင် ရရှိသွားသည်။ ဒါနန်းအသင်းအတွက် ဂိုးများကို နောက်ခံလူ ကော်စမင်က (၄၂) မိနစ်နှင့် (၅၅) မိနစ်တို့တွင် သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ဧရာဝတီအသင်းအတွက် ချေပဂိုးကိုမူ (၈၈) မိနစ်တွင် နေလင်းထွန်းက သွင်းယူပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီအသင်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ကစားသမားများဖြစ်သည့် လီအန်ဒရို၊ ဒိုမီနစ်၊ မာဂျန်တို့ အပါအ၀င် စိုးကျော်ကျော်၊ နိုင်လင်းဦး၊ ဇော်ဇော်ဦး၊ ဟိန်းသီဟဇော်၊ နန္ဒလင်းကျော်ချစ်တို့ဖြင့် လူစုံအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒါနန်းအသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ V -လိဂ် အမှတ်ပေးချန်ပီယံ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
၀လောင်ယန်ရွာအနီးတွင် ကုန်စိမ်းတင်ကားများ KIA တောင်ထားသောမိုင်းကြောင့် ပျက်စီး
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃
ချီဗွေမြို့နယ် ဂန့်ဂွင်းရွာမှ မျောချောင်းရွာရှိ ဒေသခံများအတွက် ကုန်စိမ်းများကို ယမန်နေ့က ကား၎စီး ဖြင့် ပို့ဆောင်ပြီး အပြန် ၀လောင်ယန်ရွာ အနီးတွင် KIA ထောင်ထားသော မိုင်းနင်းမိပြီး ယာဉ်တစ် စီးပျက်စီး သွားရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
မိုင်းကြောင့် ကားမှာ ပျက်စီးသွားပြီး ယာဉ်ပေါ် တွင်လိုက် ပါလာသူ ၂ဦးမှာ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဒဏ်ရာရသူများကို ဂန့်ဂွင်းမှတဆင့် ဖီဖော်ရှိဆေးခန်းသို့သွား ပို့ဆောင် ကုသပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကျဆုံး ဂျပန်စစ်သည် ရုပ်ကြွင်းများ ရှာမည်
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under သတင်းများ | No comments
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ကို မြန်မာပြည် တွင်း တနေရာတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Japanfocus)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများ၌ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်း က ကျဆုံးခဲ့ကြသော ဂျပန်စစ်သည်များ၏ ရုပ် အလောင်းမြှုပ်နှံရာ နေရာများကို ဂျပန် ပုဂ္ဂလိ က အဖွဲ့ အစည်းတခုက တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း၍ မတ်လဆန်းမှ စတင် ရှာဖွေတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျပ်မပြည့်တဲ့ အမျိုးသမီးအား သားမယားပြုကျင့်သူ ဖမ်းဆီးအရေးယူ
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under သတင်းတို | No comments
၂၅-၂-၂၀၁၃ရက်နေ့ ၁၆၀၀ အချိန် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့နယ်၊ xxxxx ကျေးရွာ၊ xxxx ရပ်ကွက်နေ အသိဥာဏ်ချို့တဲ့နေသူ မ xxxx (၁၇)နှစ်သည် နေအိမ်ဘေးရှိ ထန်းတောတွင် ထန်းသီးကောက်ရန် ထွက်လာစဉ် ခင်မင်ရင်းနှီးသူ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကျူအင်းကျေး ရွာနေ ကိုလင်း(၂၅)နှစ်က ချစ်ကြိုက် ကြောင်းပြော ဆိုပြီး ထန်းတောအနီးရှိ လယ်ကွင်းသို့ခေါ်ဆောင်ကာ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း
၀ိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဆဒုံးမြို့ အနီးရှိ လနပါရေတံခွန်းအနီးရှိ အစိုးရ တပ်စခန်း တစ်ခုသို့ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦး လက်နက်ဖြင့် အလင်း ၀င်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အလင်းဝင်ရောက်လာသော KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦး သည် တပ်မဟာ(၅) ရင်း ၃၀မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ပြီး သူ့ကိုင်ဆောင်သော လက်နက် များဖြင့် ယမန့်နေ့ ညနေ ၅နာ ရီခွဲ ခန့်က အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ '
၎င်းတို့၂ဦးသည် မကွေးတိုင်း၊ အောင်လံမြို့နှင့် အရာတော်မှ ကချင် ပြည်နယ် တွင် ရွှေလုပ်ငန်း လာရောက် လုပ်ကိုင်ရင်း KIA ၏ လူသစ် လူသစ် စုဆောင်းခြင်းခံရပြီး မုန်ဆန်ယန် သင်တန်းကျောင်းတွင် KIA ၏သင်တန်းပေးခြင်းခံရကာ KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ ရကြောင်း၊ KIA တပ်မဟာ ၅ တွင် လှုပ်ရှားတပ်ရင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါသည်။
လယ်ယာမြေ ပြန်လည် ရရှိရေး တောင်းဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး မအူပင်မြို့နယ် မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စု၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ပဋိပက္ခ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး သေဆုံး
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ် မလက်တို ကျေးရွာအုပ်စု၌ လယ်ယာမြေ ပြန်လည် ရရှိရေး တောင်းဆိုမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အဆိုပါ ပဋိပက္ခတွင် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနက် ရဲတပ်သား ရဲကျော်သူသည် ဖေဖော် ၀ါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး၌ ဦးခေါင်း ဓားခုတ်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူများအနက် ဒေသခံ ၁၅ ဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၇ ဦးကို မအူပင် ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်သဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံးကြီးသို့ ပို့ဆောင် ခဲ့သည့် ရဲတပ်သား ရဲကျော်သူမှာ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ပူးပေါင်းရန် ကြိုးစားခဲ့သော KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် များအား သေဒဏ်ပေးရန် ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင် ဆုံးဖြတ်
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေ စဉ် အတွင်း အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း ရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူး အဆင့် ရှိသူ တစ်ဦး အပါအ၀င် KIA အဖွဲ့ဝင် (၄၂)ဦး အားသေ ဒဏ်အပြစ်ပေး ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃)ရက်နေ့ လိုင်ဇာဟိုတယ် အစည်း အဝေး ခန်းမ တွင် ကျင်းပ သည့် အရေးပေါ် စစ်ဆင်ရေး အစည်း အဝေး တွင် KIA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်မှ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA အရာရှိတစ်ဦးမှ ပြောကြားသည်။
သစ်တန် ၈၀၀ ၊ မော်တော်ယာဉ် ၁၁ စီးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသား ၄ ဦးအား ဖမ်းဆီး
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under မှုခင်း | No comments
ကချင်ပြည်နယ် ၊ ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ အတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့က တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ် နေသည့် တရုတ် နိုင်ငံသား ၄ ဦးအား သစ်လုံးတန် ၈၀၀ ၊ မော်တော်ယာဉ် ၁၁ စီး ၊ ဆိုင်ကယ် ၃ စီးနှင့် အတူ ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ဆင်ဘို မြို့နယ်ခွဲ ၊ ၀ဲကြီး ကျေးရွာ အနီး တရားမ၀င် သစ်ခိုးထုတ်လုပ် နေကြောင်း သတင်းအရ မြစ်ကြီးနား မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ယာယီ ရဲမှူး လှရီ နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ က နယ်မြေခံ တပ်မတော် စစ်ကြောင်း နှင့် ပူးပေါင်း၍ နယ်မြေ ရှင်းလင်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရာ ၀ဲကြီး ကျေးရွာ အောက်ဘက် ၃ မိုင်ခန့် ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းမှ အတွင်းဘက် ၁ မိုင်ခန့် အကွာတွင် ချွမ်ဂုဝမ် ၊ ဆန်ကျုံရှန် နှင့် ချိန်ကွမ်ရှမ်း ဆိုသည့် တရုတ် နိုင်ငံသား ၃ ဦးနှင့် အတူ ပီကင်းဂျစ် ၁ စီး ၊ သစ်တင်ယာဉ် ၇ စီး ၊ ၁၀ ဘီးယာဉ် ၂ စီး ၊ XG-951 ဒိုဇာ အ၀ါရောင် ၁ စီး ၊ Yinxaing 125 ဆိုင်ကယ် ၃ စီး ၊ အရှည် ၉ ပေ သစ်လုံး အရွယ်စုံ ၁၅၆၀ လုံး ( တန်ချိန် ၈၀၀ ) အား ရှာဖွေ သိမ်းဆည်း ရမိပြီး ည ၁၀ နာရီခွဲ ခန့်တွင် ကျန်လျှိုဝမ် ဆိုသူ တရုတ် နိုင်ငံသား တစ်ဦး ကိုပါ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
နော်ဝေရောက် မြန်မာတွေ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဆန္ဒပြနေ စဉ် ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၃ (ဓာတ်ပုံ -
ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးထွက်လာတဲ့ မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အင်္ဂါနေ့က နော်ဝေနိုင်ငံကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာ ချိန်မှာပဲ နော်ဝေရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက သူ့ကို ၀ိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြ ထားပါတယ်။
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့က သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တည်းခိုတဲ့ Hotel Continental ရှေ့ မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၇၀ လောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ဆန္ဒပြကြတာပါလဲ။ ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဝေနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးမင်းမင်းဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
ပေ ၄၀x၆၀ ကျယ်တဲ့ မြေတစ်ကွက်မှာ ဧည့်သည်ကိုအားနာလို့ ၁၀ပေပတ်လည် တဲထိုးပြီး နေခွင့်
ပြုထားတယ် .. သူ့ဆွေမျိုးတွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတစ်မျိုး၊ ခိုးဝှက်ပြီးတစ်သွယ် ကျနော့်
မြေကွက်မှာ ခေါ်ပြီးနေနေကြတယ် .. ကျနော့်သားသမီးတွေကို ရန်လုပ်တယ် .. သူတို့ကို ပြန်မောင်း
ထုတ်တော့ မဖယ်ပေးဘူး သူတို့နေနေတဲ့ သူတို့နေရာဆိုပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမျက်နှာပြောင်
တိုက်တယ် လူပါးဝတယ် .. ပတ်ဝန်းကျင်ခြံတွေကိုပါ စည်းရုံးခြင်း၊ဗြောင်လိမ်ခြင်းတွေနဲ့ နည်းမျိုးစုံ
နဲ့ ကျနော့်ကိုပြန်ကိုက်၊ပြန်ဟောင်တယ် .. ဒင်းတို့ကို ကျနော်ဘာလုပ်သင့်လဲ ?
မျှော့ ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကို သိကြမှာပေါ့ .. ကပ်ပြီးရင် ခွါမရတော့ဘူး .. ဒါပေမယ့် သွေးစုပ်လို့ဝသွား
ရင်တော့ သူ့အလိုလိုခွါသွားတယ် .. မျှော့တွယ်တာကို ချစ်လို့လာတွယ်တယ်လို့တော့ ထင်မနေ
ကြပါနဲ့ .. သွေးစုပ်ချင်လို့ လာတွယ်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားပါဦး .. သတိမမူ ဂူမမြင် ဆိုတဲ့
စကားလို အမှတ်တမဲ့နဲ့မေ့လျော့နေမိမှာစိုးလို့ သတိပေးတာပါဗျာ ..
မအူပင် ပဋိပက္ခမှ ဒဏ်ရာရသူများ မအူပင်ဆေးရုံကြီးသို့ (၅)ဦး ထပ်မံရောက်ရှိ
မအူပင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၂၇။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့ နယ် ရှိ ပလောင် ရွာတွင် ယမန်နေ့ ကဖြစ်ပွား ခဲ့သော ဆန္ဒပြ ရွာသား များနှင့်ရဲများ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုတွင် ဒါဏ်ရာရရှိသူ ရွာသား (၅)ဦးသည် မအူပင်ဆေး ရုံကြီးသို့ ယနေ့မနက် (၃)နာရီ အချိန်တွင် ထပ်မံရောက် ရှိလာသည်။ ပလောင်ကျေးရွာ တွင် ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် ဒေါက်တာမြင့်စိန် ပိုင် အော့ချက်ဒ် ကုမ္ပဏီ ပိုင်ငါးမွေးကန်ပေါင်အား ဖျက်ဆီး၍ လယ်မြေ အဖြစ် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန် ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရာ အာဏာ ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ကာ တားဆီး ထား သည့်အချိန်တွင် ယင်းဒေသမှလယ်သမားများမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များအား ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ နှစ်ဘက် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မျက်မြင် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောက်စိမ်း ကျောက်မျက် တင်ပို့မှုကို တားမြစ်ပိတ်ဆို့ထားသော အမေရိကန်အစိုးရက ယင်းပိတ်ပင် ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန် ခြေလှမ်းတစ်ခုအ နေဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော် သတ္တုနှင့် သယံဇာတရေးရာ ကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ရေးရာ အထူးသံတမန်နှင့် ညှိနှိုင်းရေး မှူးဖြစ်သူ H.E Mr. Carlos Pascual နှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တစ်နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး အထက်ပါ အကြောင်းအရာအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးလှဆွေ (မကွေး-၁၂) က ပြောကြားသည်။
ငွေလဲနှုန်းကို မျက်ကွယ်ပြုနေသော အစိုးရအား သူရဦးရွှေမန်း မေးခွန်းထုတ်
အမေရိ ကန်ဒေါ်လာနှင့် မြန်မာ ကျပ်ငွေ တရားဝင် လဲလှယ် ခွင့်ပြုခဲ့ သည့် အချိန်မှ ယနေ့ အထိ တစ်ဒေါ် လာလျှင် ၈၅၀ ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိနေပြီး အစိုးရက ပြည်သူများ အကျိုးရှိသောနှုန်း သို့ရောက် အောင် ထိန်းညှိပေးခြင်း မရှိသည့် အတွက် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တွင် မေးခွန်းထုတ် ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။
“နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ တစ်ဦးချင်း ၀င်ငွေကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဖော်ပြရာမှာ အမြင်ကောင်း ကောင်း ကိန်းဂဏန်း များအောင် တစ်ဒေါ် လာငွေလဲနှုန်း ၈၅၀ ကျပ်ဝန်းကျင်မှာပဲ ထားနေ တာလား။ ၉၅၀၊ ၁၀၀၀ ကျပ် ၀န်းကျင်ထားရှိမှ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူအတွက် ကောင်းမှာကို သိလျက်နဲ့ မျက်ကွယ်ပြုနေတာလား” ဟု သူရဦးရွှေမန်းက ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ တဖွဲ့က တရုတ်အစိုးရကို ကျားမှောင်ခိုလုပ်ငန်းကို အားပေးဟု စွပ်စွဲ
Posted by drmyochit Wednesday, February 27, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တရားမ၀င် မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူတွေထံက သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့တဲ့ ကျား ၁၆ ကောင်ထဲက တကောင် (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂)
တိရစ္ဆာန်တွေ အပေါ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး နိုင်ငံတကာ ကြိုးပမ်း မှုတွေကို လိုက်နာဖို့ သဘောတူ ထားတဲ့ တရုတ် အစိုးရဟာ ကျားသားရေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ် အပိုင်းတွေ မှောင်ခိုေ ရာင်းဝယ် ဖောက်ကား မှုတွေကို အားပေးနေ တယ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ တဖွဲ့က စွပ်စွဲလိုက် ပါတယ်။
၁၅ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးအား လူကုန် ကူးမှု ကျူးလွန် ခဲ့သူနှစ်ဦးကို တောင်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံး က အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်စီချမှတ်
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under မှုခင်း | No comments
၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား လူကုန်ကူးမှု ကျူးလွန်ခဲ့သူနှစ်ဦးကို တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး က အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂နာရီခန့်က ဒလမြို့နယ်၊ ကမာကဆစ် ရပ်ကွက်နေ ဒေါ်...........မှ ၎င်းပေါင်နှံထားသည့် ထမီ ပြန်ရွေးရန် ကျပ် ၁၂ဝဝ ပေး၍ သမီးဖြစ်သူ မ....... (၁၅)နှစ်အားစေလွှတ်လိုက်ရာ သမီးဖြစ် သူမှာ ထိုနေ့က နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ရောက် ရှိမလာကြောင်း သိရသည်။
မင်းပြားမြို့ နယ် ၊ တရဂူ(ရွာဟောင်း)တွင် စိတ်မနှံ့သူတစ်ဦး၏ သတ်ဖြတ်မှု ကြောင့် လူ(၆)ယောက် သေဆုံးဒဏ်ရာရစေသည့် လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ မင်းပြားမြို့ နယ် ၊ ကျွဲချိုအုပ်စု ၊ တရဂူ(ရွှာဟောင်း)တွင် ယနေ့ နံနက်(၇)နာရီခန့် က စိတ် မနှံသူ တစ်ဦး၏ သတ်ဖြတ် မှုကြောင့် သူ့ မိဘ အပါ အ၀င် လူ(၆)ယောက် သေဆုံး ဒဏ်ရာ ရရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရဂူရွာဟောင်းတွင်ယနေ့ နံနက်(၇)နာရီခန့် က ချင်းတိုင်းရင်းသားတို့ ၏ ရိုးရာ နတ်ကနား ပွဲကျင်း ပနေစဉ် စိတ်မနှံသူ မောင်မြထွန်း (တရားခံ)က စိတ်ဖေါက်ပြန်ကာ နတ်ကနားပွဲအတွင်းသို့ဝင်ရောက် လာပြီး နတ်ကနားပွဲမှ နီးစပ်ရာ လူများ
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းနှင့် အစိုးရတပ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရှမ်းပြည် တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း အဖွဲ့နဲ့ ပစ်ခတ် မှုငြိမ်နေ တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရတပ်နဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်းတပ်တွေကြား ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွယ်လင်ခရိုင် ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲ ခိုအွတ် ရွာအ နီးက တောအုပ်ထဲမှာ အရှေ့ အလယ် ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက်က ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ရှမ်းပြည်တပ်မေတာ် တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောဝ်ဆိုင်က ပြောပါတယ်။
ကလေးငယ် ၇ ဦးကို ခိုင်းစားနေတဲ့ မြန်မာ ၃ ဦး ထိုင်းရဲက ဖမ်းလိုက်ပြီ
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under သတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို အဓမ္မခိုင်းစေမှုနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီး ရမိ ခဲ့တယ်လို့ ခုမ်းချတ်လိုတ် ထိုင်း သတင်းမှာ ဖော်ပြသွားပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ ထောင်းလော်ရပ်ကွက် အေကမိုင်း လမ်းဘေးတေလျှာက်မှာ အသက် ၁၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ချိုချဉ်လိုက်ရောင်းနေတယ်လို့ သတင်းပေး ချက်အရ ထောင်းလော် ရဲစခန်းက ခြေရာခံ လိုက်ခဲ့ရာမှာ ကလေးတွေကို ခိုင်းစားနေတဲ့ ဆွန်လုန်ရပ်ကွက် ဖတ်ထနားကန် လမ်းသွယ် ၂၀ က မြန်မာ ၃ ဦးကို မနေ့ည ၆ နာရီက ဖမ်းမိခဲ့တာလို့ ထောင်းလော် ရဲစခန်း တာဝန်ကျ ရဲမှူးကြီး ဗိုလ်မှူး ကျတ်ကျွန်း ကရတ်က ပြောပါတယ်။
မအူပင်မြို့နယ် လယ်သမားများ ပစ်ခတ်ခံရ ၊ ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန် ထားသည့် မအူပင်မြို့နယ် အတွင်းမှ လယ်သမားများ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက် ဆုံး သတင်း များအရ ယနေ့ ညနေ ၆နာရီ ခန့်က ပစ်ခတ် မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အခြေ အနေ များကို အဆင်ပြေစေရန် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းနေစဉ်မှာပင် ယခုကဲ့သို့ အခြေအနေ တင်းမာ မှု များဖြစ်ပေါ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော်တို့ အခုရောက်နေတဲ့နေရာက ပလောင်ရွာပါ ဒီကနေ လှမ်းကြည့်နေကြတာမြင်နေရတယ် ကြည့်နေရင်းမှာပဲ ၆ ယောက် လောက် လဲကျ သွားတာ ကိုတေ့ရတယ် အခြေအနေကတော့ တင်းမာ သွားပြီ" ဟု ယင်းကိစ္စကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ဦး ကပြောကြား သည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖူလုံရေး ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်သွားရန် မြန်မာ ပါဝင်သော လေးနိုင်ငံပူးတွဲအစည်းအဝေး၌ ကြေငြာ
ဒါကာ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော ၁၁ ကြိမ်မြောက် BCIM လေးနိုင်ငံ ပူးတွဲ အစည်း အဝေး ကဒေသတွင်း သဘာဝ အရင်း မြစ်များ ထုတ်ဖေါ်ခြင်းနှင့် စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍ များတွင် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် သွားကြရန် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန် လိုက် သည်။
အစည်းအဝေးအတွက် လေးနိုင်ငံပူးတွဲထုတ်ပြန်သောကြေငြာချက်ထဲတွင် “စွမ်းအင်ဖူလုံရေးဟာ BCIM ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ အတွက် အရေး ကြီးတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းအင် ကဏ္ဍမှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေး၊ တူးဖေါ်ရှာဖွေရေး၊ ရင်းနှီးမြှပ်နှံရေး ကိစ္စတွေမှာ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် သွားကြဖို့ ထူးခြားတဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပါတယ် ” ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများ အားဖျက် ကိုဖျက် ဆီးပြုလုပ် ပါက စုံစမ်းကာ တရားဥပဒေအရ စစ် ဆေးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါ ရီလ ၂၅ရက်က ရန်ကုန် မြို့(၃၈) လမ်းရှိ ရန်ကုန်မြို့စည် ပင်သာယာရေးကော် မတီပတ်ဝန်း ကျင်သန့်ရှင်းရေးဌာနတွင် လက် ထောက်ဌာန မှူးဦးရဲကျော်မိုးက မီဒီယာများ အားပြောကြား သည်။
““ပထမတစ်ခါက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်းနဲ့ သိမ်ဖြူ လမ်း ထောင့်မှာရှိတဲ့ အများပြည်သူသုံး သန့်စင်ခန်းတစ်ခုကိုစည်းကမ်းမဲ့ ဆေးတွေနဲ့ စာတွေကိုရေး သွားပါ တယ်။ အခု ဒုတိယတစ်ခါ ဗိုလ် တစ်ထောင်မြို့နယ်၊စိန်ပေါလ်မြေ ပေါ်သန့်စင်ခန်းတစ်ခုကိုထပ်လုပ် သွားပါတယ်။
မန်းတွင် ယနေ့တစ်ရက်ထဲ ပေါ့ဆမီးသုံးကြိမ် လောင်
မန်းတွင် မီးလောင်မှု တစ်ရက်ထဲ သုံးကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သုံးကြိမ်စလုံးတွင် ပေါ့ဆမှုကြောင့် လောင်ကြွမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ နံနက် ၄နာရီ ၄၅မီနစ်အချိန်တွင် မဟာအောင်မြေမြိုနယ်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက် အကွက် အမှတ် (၉/၅၁)နေ အိမ်ရှေ့တွင်ရပ်ထားသော ၉ခ/26681ရတနာစိုး မှန်လုံး မန်း-လားရှိုး-မူဆယ်ပြေးဆွဲသော
ကား ကိုလောင်ကြွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်နောက်လိုက်မှ ကားပေါ်တွင် ခြင်ဆေးခွေထွန်းအိပ်ယာမှ ကားအပေါ် ပိုင်းလောက်ကြွမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး ၅နာရီ ၁၀မီးနစ်တွင် မီးငြိမ်းသွားကာ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး 3970000 ကျပ် ဆုံးရှုံးခဲ့ သည်။
The Voice Weekly Editor သို့ ပေးစာ
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under ပေးစာ | No comments
ဒီစာကို ကျုပ် ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ အခုမှ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အပြောင်းအလဲ တွေကို ကြည့်ပြီးမှ ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းထွန်း (ငြိမ်း) ကို ၂ နှစ်ခန့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးမှ ဆန္ဒအလျောက် နုတ်ထွက်သွားပြီးနောက် ဘယ်သူ့ကို ခန့်အပ်မလဲဆိုတာ တစ်တိုင်းပြည်လုံး နီးပါး စိတ်ဝင်စားသော ကိစ္စပါ။
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under ကဗျာ | No comments
. . .စတင် . . . စင်တင် . . .ခဲ့ကြ။
လွတ်လပ်ပြီ . . . လွတ်လပ်ပြီ ...တဲ့။
အဲဒီလို ထင်တိုင်းကျဲတတ်တဲ့စရိုက်လား . . .
ကျော်ကြားမှုညည်းခြင်းထဲမှာ တဖျပ်ဖျပ်လူးနေတဲ့ အပိုင်းအစများ
မွေးရာပါဆော့ဝဲလ်တစ်ခုရဲ့ အသုံးဝင်မှု တန်ဖိုးများ
မြ၀တီမြို့ တွင် KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ (ဗိုလ် ထိန်မောင်) အဖွဲ့ မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး M-16 သေနတ်ကျည်ပေါက်ထွက်မှုကြောင့် ၁၀ တန်းကျောင်းသား တစ်ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် (၅)နာရီ အချိန် ခန့်က ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပြည်သာ ယာလမ်း၊ လမ်းသွယ်(၄) ရှိဦးငို+ ဒေါ်ခင်မေ တို့၏ နေအိမ် တွင်KNU/ KNLA (၇၀၉) တပ်ရင်း မှ တပ်သား နှုတ်နီ သည် ၄င်းကိုင်ဆောင်သော M - 16 အမျိုးအစား သေနတ်မှ မတော် တဆ ကျည်ပေါက် ထွက်မှုဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် ထိစပ်နေသည့် နယ်စပ်မြို့နှစ်မြို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဆက်ဆံရေးရုံးများ ယခုနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် သဘောတူ
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့် ထိစပ်နေသည့် နယ်စပ်မြို့နှစ်မြို့တွင် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် ဆက်ဆံရေးရုံးများကိုယခုနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်သွားရန် မြန်မာ၊ တရုတ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ သဘောတူထားကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် (၉) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်ဒေသ ခြောက်နိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်(COMMIT) အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဝင်းနိုင်ထွန်းထံမှ သိရသည်။
တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားတွင် ချီတက်နေ သည့် စစ်သားများ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက လာမည့် ဘဏ္ဍာရေး နှစ် ၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံး စရိတ်အဖြစ် ငွေကျပ် ဘီလီယံ တထောင်ကျော် တောင်းခံထား သည့် အနက်မှ စစ်လက်နက်၊ လေယာဉ်၊ သင်္ဘော များနှင့် တပ်မတော် စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ စက်ရုံများ၏ စက်ကိရိယာများအတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၆၀၀ နီးပါး အသုံးပြု မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီက ရရှိထားသော ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် စာရင်းဇယား အရ သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ၊ ဘုံဘေမြို့၊ ကလယန်းနယ်မှ ၂၄ ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွား ဘာသာခြား ၂၀ တို့၏ ဗုဒ္ဓဘာ သာ အဖြစ် ခံယူပွဲကို ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ကျင်းပ ခဲ့သည်။ ထိုနေရာသည်၊ စာရေးသူတို့နေရာ စောမယကော လိပ် နဲ့ ၁ နာရီကျော်ကြာ ကားမောင်း ရ သည်။
(ဗုဒ္ဓဘာ သာအဖြစ် ခံယူပွဲ အခမ်းအနား)
စာရေးသူတို့ မြန်မာရဟန်းတော် ၅ ပါးကို ဘုံဘေတက္ကသိုလ်၊ ပါဠိဌာန ဆရာများ၏ အဆက်သွယ်ဖြင့် ထိုအခမ်း အနားသို့ တက်ရောက်ရန် ပင့်ဖိတ်သည်။ ၀ါတော် အတော်ကြီးရင့်ပြီ ဖြစ်သော အိန္ဒိယ ဆရာတော်ကြီး အပါဝင် အိန္ဒိယ ရဟန်းတော် ၅ပါးလဲ ပါဝင်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသော်လည်း မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်လွန်းသည် KIA သောင်းကျန်းသူ
ကချင်ပြည်နယ် မန်းဝိန်းကြီးဒေသတွင် တပ်မတော် နှင့် KIA သောင်းကျန်းသူ တို့ တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် တိုက် ခိုက်ခြင်းမပြုရန် ညှိနှိုင်းထားသောလည်း အချို့သော KIA သောင်းကျန်းသူများသည် လက်နက်အား ကိုးဖြင့် အပြစ်မဲ့သော တိုင်းရင်း သားများ ကို ရန်လိုတိုက်ခိုက်နေမှုများရှိနေပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် တန်ဖိုးနည်း ရောင်းချ မည်ဟု နာမည်ကြီးခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင် မရောင်း ချနိုင် သေးသည့် ဖုန်းများအား ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ တွင် ကျပ် နှစ်သောင်းဖြင့်ရောင်းရန် စီစဉ် ထားကြောင်း သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းမှ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပြည်တွင်း ဂျာနယ် တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
စကားတွေ အများကြီးပြောနေသော ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ
Posted by drmyochit Tuesday, February 26, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
၁၉၆၃ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သော စာရေးသူ ၏ဖခင် လန်ထောင်ဦးစပ်စုရေး သားခဲ့သည့် “ဦးစပ်စု၏ ၇၅ နှစ်အကြား ၄၉ နှစ်အမြင် မြန်မာပြည်” စာအုပ်မှ အောက်ပါဆောင်း ပါးတိုလေး ကို ဖတ်ရှု ကြည့်ပြီး ဖော်ပြထား သည့်ဓာတ် ပုံကို လေ့လာကြည့်စေလိုပါသည်။
ကချင်ပြည်ဆိုသော စာတမ်းအား မိုးညှင်းမြို့ ဒေသခံပြည်သူများ ဘ၀င်မကျ
ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေးနှင့် စစ်ဘေး သင့်ပြည်သူ များကို ကူညီရေး ဟူသော ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် လွတ်လပ်ငြိမ်း ချမ်းပန်းရဲ့ လမ်း (လူမှုကွန်ရက်) တေးဂီတဖျော် ဖြေရေးအဖွဲ့သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက် ညပိုင်းနှင့် ၂၃ ရက် နံနက်ပိုင်းတို့တွင် “ကချင်ပြည်နယ်” မိုးညှင်းမြို့အတွင်းသီဆိုဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြသည်။
ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရသည့် အမျိုးသမီးကို ဖော်ထုတ် နိုင်သည် ဟု ဆိုသော သတင်း မှန်ကန်မှု မရှိ
ဖြူးမြို့ အနီးတွင် ခေါင်းဖြတ် အသတ် ခံရသော အမျိုး သမီးကို မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ ဆိုသည့် သတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိပဲ စုံစမ်းနေဆဲသာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် ၊မှူခင်း ဌာန မှ ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး တစ်ဦး က ပြောကြားသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်က ထိုင်းနိုင်ငံ က ဆယ်ကျော် သက် လူငယ်တွေကြားမှာ မူးယစ်ဆေးပြဿနာ အကြီး အကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ရှိ သူတွေ ကိုယ်တိုင် ခေါင်းခြောက်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ အခုတော့ ထိုင်းမှာ အဲဒီ အသံမကြားရတော့ဘဲ မာဂျေတို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေကြား မှာ မူးယစ်ဆေး စွဲတဲ့ ပြဿနာ ကတဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာနေပြီ။ သက်ဆိုင်တဲ့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ သတိပြုမိ မပြုမိတော့ မာဂျေလည်း လက်လှမ်း မ မီပေဘူး။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း စိစစ်မူ ပြုလုပ်ရန် လိုလား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဇွန်လနှင့် အောက်တိုဘာလ အတွင်းက အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားသော မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် များအား အစိုးရမှ အိုးအိမ်များ တည်ဆောက်ပြီး နေရာချပေး သွားရန် စီစဉ်နေရာ ရခိုင်ဒေသခံ ပြည်သူများက ၁၉၈၂ ခုနှစ် နို်င်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း စိစစ်မူ ပြုလုပ်ပြီးမှ အိုးအိမ်များ တည်ဆောက် နေရာ ချပေးသွား ရန် လိုလားနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သားညီ ၊ မိုးယံဇွန် ၊ ဆူးရှတို့ ပါဝင်သည့် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးသရုပ်ပြပွဲ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ နန္ဒ၀န် ဈေးသာယာရေးအဖွဲ့က ကြီးမှူး လျက် ဈေးသူ၊ဈေး သားများ မီး သတိပြုရေး အသိ ပညာပေး ဟော ပြောပွဲနှင့် လက်တွေ့မီးငြှိမ်း သတ်ရေး သရုပ်ပြပွဲကို ယနေ့ နံနက် (၉)နာရီက နန္ဒ၀န်ဈေး ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်ဦး စီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ဝင်း ဦးဆောင်သော ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ရဲ့ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးကို မနေ့က စတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ကြာမြင့်မယ့် အဲဒီ အစည်း အဝေးမှာ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ မြန်မာ နဲ့ အီရန် နိုင်ငံတွေရဲ့ လူ့အခွင့် အရေး အခြေ အနေတွေ ကို အဓိကဆွေးနွေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နှစ်ကျပ်ခွဲ ရွာ မီးလင်းရန် ကူညီသည့် ဆရာတော် နှင့် ရွာသားများ ကို ဖမ်းဆီး
ကျောင်းပန်းတောင်းမြို.နယ်၊ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာမှ မီးလင်းရေးကော် မတီ နာယက ဆရာတော် ဦးကော သလ ဆန္ဒပြ ရွာသား တွေ ကို ရဲတပ် ဖွဲ့က မနေ့ညက အတင်းအဓမ္မ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးပြီး ထိမ်းသိမ်း ထား တယ် လို့နှစ် ကျပ်ခွဲ ရွာသား တစ်ဦး က FNG ကိုပြောပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်း၌ EPC အယောင်ဆောင်၍ ငွေကြေးလိမ်လည်တောင်းခံမှုများရှိလာ
ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိကျေးရွာများ၌ အစိုးရ လျှပ်စစ် ၀န်ထမ်း အယောင်ဆောင်၍ ပိုက်ဆံ လိမ်လည် တောင်း ခံမှု များ အဖြစ်များ လာကြောင်း ဒေသခံ များထံ ကသိရသည်။
၎င်းတို့ ပိုက်ဆံတောင်းပုံမှာ ဓါတ်တိုင်နှင့်အိမ် ကိုက်သုံးရာကျော်လျှင်မီးကြိုးဆွဲ၍ မရခြင်းများ အတွက် ပိုက်ဆံ မည်မျှပေး ပါက မီးကြိုး ဆွဲပေး မည်ဟု ဆိုကာ ပိုက်ဆံ လိမ်လည် ယူသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ယခင်အစိုးရ၌ တာဝန်ရှိကြောင်း ဦးဝင်းတင်ပြော
ယခင် အစိုးရ လက်ထက်၌ အကြောင်း အမျိုး မျိုးကြောင့် နှစ် ရှည် အကျဉ်းကျ ခံခဲ့ရသော နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်းသား များ၏ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နိုင်ငံ ရေးအကျဉ်းသားများအား ပြန်လည် ၀န်ချတောင်း ပန်ရေး အတွက် ယခင် အစိုးရခေါင်းဆောင် ပိုင်း၌ တာဝန်ရှိ ကြောင်း သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် (ဟံသာဝတီ) က Hot News သို့ပြောကြားသွားသည်။
၁၅ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးအား လူကုန် ကူးမှု ကျူး...
မင်းပြားမြို့ နယ် ၊ တရဂူ(ရွာဟောင်း)တွင် စိတ်မနှံ့သ...
ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းနှင့် အစိုးရတပ် ပစ်ခတ်...
ကလေးငယ် ၇ ဦးကို ခိုင်းစားနေတဲ့ မြန်မာ ၃ ဦး ထိုင်းရ...
မြ၀တီမြို့ တွင် KNU/ KNLA ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စ...
ကချင်ပြည်ဆိုသော စာတမ်းအား မိုးညှင်းမြို့ ဒေသခံပြည်...
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေအတိုင်း စိစစ်မူ ပြုလုပ်...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် သားညီ ၊ မိုးယံဇွန် ၊ ဆူးရှတို့ ...
နှစ်ကျပ်ခွဲ ရွာ မီးလင်းရန် ကူညီသည့် ဆရာတော် နှင့် ...
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အတွင်း၌ EPC အယောင်ဆောင်၍ ငွေကြေး...